Entwasahlobo ka-2004, isiteshi TNT kudlalwé ngokoqobo show "Dom-2". Umqondo yokudala iphrojekthi okungewakho TV umethuli Valery Komissarov. Ngaphansi isibhamu amakhamera online, intsha wazama ukulungiselela empilweni yakho. Le phrojekthi yaphumelela futhi waletha imali eningi abagqugquzeli. kuze kube yilolu suku, uhlelo uyawuthanda impumelelo enkulu phakathi kanti nabantu abahlosiwe. Mingaki iminyaka "Indlu-2" noma wayeyobulawa, it is njalo ukwamukela abalandeli eziningi.
Umlando yokuzalwa iphrojekthi
I version kwecala uhlelo "Indlu" yavela ezikrinini wesiteshi TNT ngo-2003. Ifomethi umbukiso wokuqala kwaba umncintiswano lemibhangqwana phezu izindlu, okuyinto bakha emoyeni. Ehola umsebenzi umculi wokuqala Nikolay Baskov ke womzimba Svetlana Khorkina. Indima induna esakhiweni ngo-Aleksey Kulichkov. Kamuva wahola Uhlelo ukuzijabulisa "Taxi" ku TNT. Ngo ukukhululwa sokugcina ababukeli ngokusebenzisa ukuvota kunqunywa okuyinto omunye abashadayo ufika ekhaya.
Indlela neminyaka "Indlu-2" abaningi, futhi lapho uqala ukuvela ezikrinini, namuhla bambalwa abantu ukukhumbula. Eminyakeni ethile edlule, abezindaba eshicilelwe ngandlebenye ukuthi umqondo yephrojekthi yathengwa inkampani Zeal kusukela UK. Ngokufana ukudluliselwa ezifuywayo, uhlelo langaphandle yimpumelelo nababukeli. Kwakuthinta ukusakaza eFrance, e-Australia, iJalimane, USA. Nokho, ukugcizelela ongalwazi phrojekthi ku nezindinganiso zomkhaya. Kwaba khona abangu-imibhangqwana kakade. Indlela fair Ukuqagela izintatheli Kunzima ukusho.
Imiphumela kokusakaza ecaleni elibhekene "House" Ngokusobala, akuzona zonke ahlelwe Umhlahlandlela TNT, ngoba ifomethi umbukiso bathuthukisa ngaphansi ngesicelo umbukeli Russian. Ngenxa yalokho, kwaba khona ukudluliselwa "Dom-2" ngoMeyi 2004. Esikhathini iphrojekthi entsha abahlanganyeli kwadingeka ukuba hhayi kuphela ukwakha indlu, kodwa futhi uthando. Uma isakhiwo sokuqala ekugcineni unikezwe pair ephelele, inguqulo ye-ngokoqobo wesibili ukukhombisa umklomelo elinjalo akuhloselwe Abahleli.
Uneminyaka emingaki "Dom-2", isikhathi eside kangaka ababemzungezile amahlazo kokuqhubeka. Ukubukeka iphrojekthi okwasusa esinamathambo emphakathini. Umbukiso ubelokhu into ukugxeka isethi abalobi, umphakathi kanye nezibalo zenkolo. Transmission osolwa kokuziphatha okubi, ukukhanga abahlanganyeli - belingisa ubuhlobo uthando ukuba ikhamera, abaholi - ukusebenzisa ubusha ukuze bazizuzise bona inzuzo, inhlangano sicasulwa ngenhloso izingxabano futhi amahlazo. izimbangi Active yephrojekthi bakutshengise kanjani iminyaka kubahlanganyeli "Indlu-2" abaningi. Ezinye zazo badutshulwe, ngokuba izingane.
indima Negative ekubumbeni ukudluliswa ekuphila nekutiphatsa wobusha lugujwa abagxeki abaningi. Iqophelo kuvalwe izishoshovu ngokoqobo show ngihlola nezindaba zohlelo, wathi wokuthi bayitholile indawo abangaya e amavidiyo izigcawu okungalungile izimpi, ukukhwelana Erotica. Nabaphikisi eziholayo "Indlu-2" wabekwa icala pimping.
Ukucabanga izinzuzo ezingabazisayo kwamasiko iphrojekthi kuletha izibalo. Okwamanje, inani labamba iqhaza kudlulwe abantu 730, kanti imibhangqwana ukuba babhalise umshado wabo, hhayi ngaphezulu kuka-14.
Ngo-2005, iqembu amasekela ukuvusela umshushisi omkhulu okhona ukumisa ukudluliswa kokusakaza futhi imenze umthwalo ayo aqavile. Abaphikisi iphrojekthi ngokushesha osolwa ngokuzama ukuphoqelela ukucwaninga kuthelevishini ehlasela izisekelo yeningi emphakathini. Ababhikishi izishoshovu kwahluleka ukufeza kuvalwe hlelo. Ngo-2009, ukuba liqulwe kabusha icala yaphela nge esiphethweni sokuthi inhlokodolobha enkantolo Presnensky wesifunda uvinjelwe ukudluliswa ukusakaza ngesikhathi sasemini. Kuze 2010, uhlelo kwaba kuphela kuhwalele, bese futhi waqala ukubonisa ntambama.
Uthando noma ukubala
Indlela kulingane yakha ubudlelwano ikumodi inthanethi Kunzima ukusho uma phrojekthi akuthathwa njengephutha luyingxenye zezimali. Izimali kubahlanganyeli umbukiso iningi ezifundeni Russia fabulous. Ukuhaha, yebo, bakhangwe project kwenani elithile abantu ukuzenzela inzuzo. TV inkanyezi kwamaholo njengoba uhlale ku iphrojekthi. Indlela TV iphrojekthi iminyaka "Dom-2" abaningi hushazela ukudluliswa izinhlamvu angazuza ku ukuthandwa kwakhe siqu. Ngakho, isilinganiso izinkanyezi izimali ngezinye izikhathi idlule uphawu $ 5,000 ngenyanga. Yiqiniso, ukuza iphrojekthi intsha ezivela kwezinye izifunda angaphuphi ngisho nokuphupha bahluleka ngengeniso esinjalo ezifundeni zabo. Abahlanganyeli hlelo, ngaphandle futhi ezothola imali eshisiwe, thola amabhonasi ezengeziwe zezimali. It inzuzo kusukela ukukhangisa, hambo, neminye imisebenzi yomphakathi.
Mingaki iminyaka "Indlu-2"
Meyi 11, 2014 umbukiso eyayithandwa sigubha iminyaka. Eminyakeni eyishumi yephrojekthi isivele emoyeni. Ngo-2005, abezindaba libike ukuthi ukudluliswa weza Guinness Book of Records njengoba iningi "eside edlala" ngokoqobo show. Idatha baye alikaqinisekiswa. Eqinisweni, uhlelo afakwe Russian Book of Records. Njengoba abaholi bezwe uthole iphrojekthi kuhlulekile. Indlela neminyaka "Indlu-2" abaningi noma kwakuyoba, endaweni ngokoqobo show kukhona abaphikisi sina e-Germany. Le phrojekthi "Big Brother." okusakaza isikhathi ukusakaza kahle ngaphambi iphrojekthi Russian. Iqiniso ukuthi German okuvezwa ubusuku nemini, ngaphandle kokuthatha ikhefu, ngakho akunakwenzeka dlula.
Bill Kaulitz: umsebenzi